कसरी आउट भए उपकुलपतिको दौडबाट माकाजु ?
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयका ट्रस्टी दमनाथ ढुंगाना पनि माकाजुकै पक्षमा थिए । त्यसैले सर्च कमिटीले तीन जनामध्ये पहिलो नम्बरमा माकाजुको नाममा सिफारिस गरेकोे थियो ।
तर, माकाजुको विपक्षका ओलीनिकट केही नेता र प्राध्यापकहरू लविङमा जोडिएपछि उपकुलपतिमा भोला थापाको पल्लाभारी भएको हो । स्रोतका अनुसार माकाजुलाई रोक्न काभ्रेका सांसद गोकुल बाँस्कोटादेखि संविधानविद् विपीन अधिकारीसम्मको लविङ थियो । बाँस्कोटा माकाजुसँग मात्र होइन, काठमाडौं विश्वविद्यालसँगै असन्तुष्ट छन् । अधिकारी भने माकाजुसँग रिसाएर गत वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालय छोडेका थिए ।
विश्वविद्यालयमा संघका गतिविधि नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै पदाधिकारी माकाजुको चर्को विरोधमा थिए । र, अहिले रोक्नलाई उनीहरू पनि लविङमा थिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका नयाँ भीसी थापा काे हुन् ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, १९:३३:००